Yesu De Bobe ne ne Nkorabata Yɛɛ Mfatoho (Yohane 15) | Yesu Asetena
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kazakh (Arabic) Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Lingala Lomwe Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Wallisian Waray-Waray Yoruba
NOKWARE BOBE NE NKORABATA NO
SƐNEA YƐBƐTENA YESU DƆ MU
Ná Yesu ayi ne yam ne n’asomafo anokwafo no abɔ nkɔmmɔ akɔ akyiri. Ɛduu anadwo dasuom no, Yesu maa wɔn mfatoho bi a ɛka koma.
Ɔhyɛɛ mfatoho no ase sɛ: “Mene nokorɛ bobe no, na m’Agya ne okuafoɔ no.” (Yohane 15:1) Yesu mfatoho no, na ɛte sɛ nea bere bi wɔka faa Israel man ho no. Ebinom kaa Israel man ho asɛm sɛ ɛyɛ Yehowa bobe. (Yeremia 2:21; Hosea 10:1, 2) Nanso seesei deɛ, na Yehowa ne Israel man no rebɛtwa abusua mu. (Mateo 23:37, 38) Enti na ɛnyɛ Israel ho asɛm na Yesu reka; ná ɛyɛ asɛm foforo koraa. Yesu ne bobe a ɛfiri afe 29 n’Agya yɛɛ ho adwuma no. Saa afe no na n’Agya de honhom kronkron sraa no. Nanso, Yesu maa wɔhuu sɛ bobe a ɔreka ho asɛm no, na afoforo nso ho wom bi. Ɔkaa sɛ:
“Nkorabata biara a ɛwɔ me ho a ɛnso aba no, [m’Agya yiyi] firi hɔ, na ebiara a ɛso aba no, ɔyiyi ho na atumi aso aba pii. . . . Sɛdeɛ nkorabata no ara ntumi nso aba gye sɛ ɛtena bobe no mu no, saa ara na mo nso montumi nso aba gye sɛ motena me mu. Mene bobe no, mone nkorabata no.”—Yohane 15:2-5.
Ná Yesu ahyɛ n’asuafo anokwafo no bɔ sɛ, sɛ ɔkɔ a, ɔbɛsoma ɔboafo bi aba; saa ɔboafo no ne honhom kronkron. Bosome ne nnawɔtwe mmiɛnsa akyi no, asomafo no ne afoforo bi nyaa honhom kronkron, na wɔbɛyɛɛ bobe no nkorabata. Ɛfiri saa bere no, na ɛsɛ sɛ “nkorabata” no nyinaa ne Yesu yɛ baako. Wɔne no reyɛ baako ayɛ dɛn?
Yesu kyerɛɛ mu sɛ: “Deɛ ɔtena me mu na me nso metena ne mu no, ɔso aba pii; ɛfiri sɛ menni hɔ a, montumi nyɛ hwee.” Yesu akyidifo anokwafo yi a wɔn ne “nkorabata” no, na wɔbɛso aba pii. Aba a wɔbɛso no bi ne sɛ wɔbɛsuasua Yesu suban, wɔbɛka Onyankopɔn Ahenni ho asɛm, na wɔahwehwɛ asuafo pii abɛka wɔn ho. Sɛ obi ne Yesu anyɛ baako na wanso aba a, dɛn na ɛbɛto no? Yesu kaa sɛ: “Sɛ obi antena me mu a, wɔtwa no twene.” Nnipa a wɔne Yesu yɛ baako no deɛ, Yesu kaa wɔn ho asɛm sɛ: “Sɛ motena me mu na me nsɛm tena mo mu a, mommisa biribiara a mopɛ na ɛbɛyɛ hɔ ama mo.”—Yohane 15:5-7.
Ná Yesu aka n’ahyɛde a yɛbɛdi so ho asɛm mprenu dada, nanso ɔsan sii so bio. (Yohane 14:15, 21) Ɔkyerɛɛ nea asuafo no yɛ a, ɛbɛkyerɛ ampa sɛ wɔredi n’ahyɛde so. Ɔkaa sɛ: “Sɛ modi m’ahyɛdeɛ so a, mobɛtena me dɔ mu sɛdeɛ madi Agya no ahyɛdeɛ so na mete ne dɔ mu no.” Nanso sɛ obi ka sɛ ɔdɔ Yehowa Nyankopɔn ne ne Ba no a, ɛno ara nnɔɔso. Yesu kaa sɛ: “M’ahyɛdeɛ ne sɛ monnodɔ mo ho sɛdeɛ medɔ mo no. Obiara nni ɔdɔ a ɛsene yei, sɛ obi de ne kra bɛto hɔ ama ne nnamfo. Sɛ moyɛ deɛ merehyɛ mo no a, na moyɛ me nnamfo.”—Yohane 15:10-14.
Nnipa a wɔnya Yesu mu gyidi no, na ɛrenkyɛ koraa Yesu de ne nkwa bɛto hɔ ama wɔn de akyerɛ sɛ ɔdɔ wɔn nyinaa. Ná ɛsɛ sɛ n’akyidifo no sua biribi fi ne hɔ na wɔn nso atumi afiri wɔn komam adodɔ wɔn ho. Yesu maa wɔhuu sɛ ɔdɔ a ɛte saa no bɛma wɔada nsow. Ná waka akyerɛ wɔn bere bi sɛ: “Sɛ mododɔ mo ho a, ɛno na ɛbɛma nnipa nyinaa ahunu sɛ moyɛ m’asuafoɔ ampa.”—Yohane 13:35.
Yesu rekasa no, ɔfrɛɛ asomafo no ne “nnamfo.” Ɔkyerɛɛ nea enti a ɔbuu wɔn sɛ ne nnamfo. Ɔkaa sɛ: “Mafrɛ mo nnamfo, ɛfiri sɛ deɛ mate afiri m’Agya hɔ nyinaa mama moahunu.” Ná ɛyɛ akwannya kɛse paa sɛ wɔne Yesu bɛyɛ nnamfo a mframa mfa wɔn ntam na wɔahu nea Agya no ka kyerɛɛ no nso. Nanso sɛ saa ayɔnkofa no bɛkɔ so a, gye sɛ ‘wɔkɔ so so aba.’ Yesu kaa sɛ wɔyɛ saa na sɛ ‘wɔbisa Agya no hɔ biribiara ne din mu a, ɔde bɛma wɔn.’—Yohane 15:15, 16.
N’asuafo a wɔne “nkorabata” no, na ɔdɔ a ɛwɔ wɔn ntam no bɛboa wɔn ma wɔagyina nea ɛda wɔn anim no ano. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wiase no bɛtan wɔn, nanso ɔkaa wɔn koma too wɔn yam sɛ: “Sɛ wiase tan mo a, monim sɛ atan me ansa na ɛretan mo. Sɛ moyɛ wiase no fã a, anka wiase bɛpɛ deɛ ɛyɛ ne dea no asɛm. Nanso ɛsiane sɛ monyɛ wiase no fã . . . nti, wiase no tan mo.”—Yohane 15:18, 19.
Yesu toaa so kyerɛɛ wɔn nea enti a wiase no bɛtan wɔn. Ɔkaa sɛ: “Me din nti na wɔbɛyɛ yeinom nyinaa atia mo, ɛfiri sɛ wɔnnim deɛ ɔsomaa me no.” Yesu kyerɛɛ sɛ nnipa a wɔhuu anwonwade a ɔyɛe nso wɔtan no no, asodi da wɔn so. Ɔkaa sɛ: “Sɛ manyɛ nnwuma a obiara nyɛɛ bi da wɔn mu a, anka wɔnni bɔne; nanso seesei wɔahunu na wɔatan me ne m’Agya nyinaa.” Saa ɔtan no maa Bible nkɔmhyɛ nso baa mu.—Yohane 15:21, 24, 25; Dwom 35:19; 69:4.
Yesu san hyɛɛ bɔ sɛ ɔbɛsoma ɔboafo a ɔne honhom kronkron no aba. Honhom kronkron no tumi sõ, na ɛbɛtumi aboa n’akyidifo nyinaa ama wɔaso aba, na ‘wɔadi adanse.’—Yohane 15:27.
Yesu mfatoho no mu no, okuafo no, bobe no ne nkorabata no gyina hɔ ma dɛn?
Aba bɛn na Onyankopɔn pɛ sɛ nkorabata no so?
Dɛn na Yesu asuafo no yɛ a ɛbɛma wɔayɛ ne nnamfo? Sɛ wiase no tan wɔn a, dɛn na ɛbɛboa wɔn ama wɔadi nkonim?